Kulamada CAAWA laga ciyaarayo tartanka Europa League & saacada la baasanayo – Gool FM
(Yurub) 11 Agoosto 2020. Waxaa Caawa la ciyaari doonaa kulamo qaar ee ka tirsan wareega siddeeda ee tartanka UEFA Europa League.
Kooxaha Shakhtar Donetsk iyo Basel ayaa caawa ku wada ciyaari doono garoonka VELTINS-Arena kulanka wareega siddeeda ee tartanka UEFA Europa League, halka sidoo kale Wolverhampton Wanderers iyo Sevilla ay ku wada balansan yihiin garoonka Schauinsland-Reisen-Arena.
Kooxaha Inter Milan iyo Manchester United ayaa xalay u soo gudbay afar dhammaadka Europa League, waxaana ay tareenka tartanka ka tuureen kooxaha Bayer Leverkusen iyo Koebenhavn.
Inter Milan ayaa afar dhammaadka la ciyaari doonta kooxdii soo baxda caawa Shakhtar Donetsk iyo Basel, halka Manchester United ay madaxa gelin doonto kooxdii soo adkaata Wolverhampton Wanderers iyo Sevilla.
Haddaba kulamada caawa laga ciyaari doono tartanka UEFA Europa League ayaa waxay kala yihiin:
10:00 Habeenimo: Shakhtar Donetsk vs Basel
10:00 Habeenimo: Wolverhampton Wanderers vs Sevilla.